प्रधानमन्त्रीले बोल्ने होइन, जवाफ दिने हो ,जहाँपनि विपक्षीले पहिले बोल्ने हो - कांग्रेसका सभापति देउवा - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : मङ्गलबार, असार ०३, २०७६१७:१७ पब्लिक आवाज /संवाददाता
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको अवरोधका कारण स्थगन भएको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताले आआफ्नै तर्क गरेका छन् । बैठकको प्रारम्भमै सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिन समय दिनुभएको थियो । काङ्ग्रेसले भने सभामुखलाई बिहानै आफ्ना नेताले बोल्नुहुन्छ भनेर समय माग गरे पनि पहिला बोल्न समय नपाएको भन्दै विरोध गरेको जनाएको छ । सोही विषयमा निरन्तर अवरोधपछि आजको बैठक स्थगन गरिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले बोल्ने नभई जवाफ दिने हो भन्दै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यस्तै भएको दाबी गरे । उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले बोल्ने होइन, जवाफ दिने हो । पहिले उहाँले बोलिसकेपछि के बोल्ने मैले ? बोल्ने भए हिजो पनि बोल्थे नि, प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनु थियो आज । जहाँपनि विपक्षीले पहिले बोल्ने हो । जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने हो । सुरुमा कहाँ बोल्छन् ?”
विप्लब प्रतिबन्ध हटाउन युरोप देखि दबाब !
प्रधानमन्त्रीलाई गहिरो प्रहार : मेरो स्कुटीको पछाडी बसेर बनस्थली हिँड्नु होस् !